Usoro 5 kacha mma Cessrix Training & Certifications iji wuo ọrụ gị na Citrix
1. CXS-203 Citrix XenServer 6.0 nchịkwa
2. CXD 300 Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp na XenDesktop 7.5
3. CXA-206 Citrix XenApp 6.5 nchịkwa
4. CNS-207 Na-emepụta Citrix NetScaler 10.5 maka Ntọala na Desktọpụ
5. CNS- 205 Citrix NetScaler 10.5: Mkpa na IZIRỊTA
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụbụ otu n'ime ụlọ ọrụ Citrix Learning Centre na India maka ọzụzụ Citrix na Gurgaon, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida & Pune India. Anyị na-enye Nzuzo Citrix Ọzụzụ dị ka Citrix Online Ọzụzụ yana Ọzụzụ Ụlọ Ọrụ na Na Na Na Ụwa dị ka UK, USA, Australia Ọzụzụ Ụlọ akwụkwọ, Ọzụzụ Nhazi Ọgbọ wdg. Ị dị njikere iji wuo Carrer na Citrix Training Courses & Certifications
Na usoro Citrix XenServer 6.0, a na-enye ihe nkwado dị iche iche na ntọala dị mkpa iji wụnye, ịhazi, dozie, ma nyochaa XenServer 6.0. Ndị nyocha nke a ga-atụlekwa otu esi hazie Ụlọ ọrụ 6.0 na-enye onyinye, ma mee ma lelee vDisks na ọnọdụ XenServer. Iji ogwe aka na-arụ ọrụ, ihe nlekota ga-enweta ikike ndị a na-atụ anya ịhazi Nwepụta Ngbanwe Distributed (DVS) na Ọzọkwa Workload Balancing (WLB). Ndị nchịkwa ga-eme ma na-elekọta ndị ọrụ Windows arụmọrụ na ọdọ mmiri nke ha ga-edozi.
Mgbe nkuzi a na-amị mkpụrụ, nkwenye nwere ike:
Wụnye ma mezue XenServer
Mee ma jikwaa netwọk
Chọpụta na Nọgidenụ Na-enwe Ngwaọrụ Kwesịrị Ekwesị
Wụnye ma hazie Ọrụ Mgbakwunye
Chọpụta VDisks na Target Devices
Ghota akwukwo mmiri
Na-emetụ ihe gbanwere na DVS.
Mee ihe nyochaa nyochaa arụ ọrụ (WLB)
Dezie elu nnweta
Nyocha na Nchọpụta nsogbu XenServer
Usoro a na-enye nkwado na ikike ndị a chọrọ iji zipụ otu Citrix zuru ezu mejupụtara ndokwa ngwa ngwa na ntinye aka na kọmputa na ọnọdụ Windows Server 2012 R2. Ihe niile a ga - eme ka ị mata otu esi emezi ngalaba nke na - agụnye akụkụ Citrix ndị a: XenServer, XenDesktop, Citrix License Server, MCS, PVS, Personal vDisk, StoreFront, NetScaler (ICA Proxy, Load Balancing, Endpoint Analysis), na Citrix Receiver. Mgbe ọ na-agafe, ihe ndị a ga-enwe ike ịmepụta XenDesktop 7.6 gburugburu na-enweghị nkwadebe ma nwalee mmegbu ahụ iji kwenye na akụkụ niile juputara na na ndị ahịa na njedebe dị n'ime ya nwere ike inweta XenDesktop akụ n'ụzọ dị irè.
Mgbe mmezu nke ọmụmụ a, ndị mmụta nwere ike:
Debe ngalaba ntọala
Hụ ngalaba XenDesktop 7.6
Hazie 7.6 akụ XenDesktop (Ngwa os nke OS, arụmọrụ ngwa ngwa, na arụmọrụ OS)
Hazie profaịlụ na atụmatụ
Wụpụta Ọrụ Mgbakwunye
Debe NetScaler ka o nye aka na XenDesktop 7.6 akụ
Citrix XenApp 6.5 Gọọmentị ntụziaka na-enye ntọala dị mkpa ka ndị nchịkwa nwee nlebara anya na ilekọta ngwa na datacenter ozugbo na-eme ka ha bụrụ onye nlekọta nye ndị ahịa n'ebe ọ bụla. Ndị na-amụ ihe ga-akwadebe maka ntinye na ndokwa Citrix XenApp 6.5, Citrix Receiver and modules, nakwa iji jiri consoles njikwa na ngwaọrụ iji hazie akụnụba, atụmatụ, ntọala nkesa na ebe obibi, ndị nbipute, ngwa ngwa nke ọma na nke ahụ bụ nanị ọnụ mmiri ice.
Egwuregwu ndị a na-agụnye na nke a gụnyere:
Ịwụnye na Configuring Web Interface na StoreFront
Inyocha Ngwa na Ọdịnaya
Onye natara Citrix
Ngwa gụgharia na App-V njikọ
Echebe nchịkọta ego
Ịkwalite Ahụmịhe Onye Ọrụ
Ihe mgbaru ọsọ nke usoro a bụ ịnye echiche dị iche iche ma kụziere ihe ndị a dị mkpa iji kpochapụ, dozie, chekwaa ma mee ka Citrix NetScaler kpuchie ya na NetScaler Ọnụ ụzọ na gburugburu ebe obibi desktọọpụ.
Echegharịrị usoro a n'ihi nbịakọta nke NetScaler kacha nso na-abịanụ (Nkọwa NetScaler 11). Dị ka akụkụ nke nwelite a, ihe ahụ ejiriwo ike gbasaa gburugburu Ọnụ Ụzọ Ntinye NetScaler bara uru karịa n'oge ọ bụla ọzọ, ma na-ekpuchi ihe ndị dị ịrịba ama nke dị na Ndenye NetScaler dị iche iche 11.
A na-ezube usoro a karịsịa maka ihe ndị na-akwadoghị ma ọ bụ na NetScaler agafebeghị. Ndị nyocha nwere ike itinye aka na-arụ ọrụ n'ime ụlọ arụmọrụ. Usoro a na-adabere na Citrix NetScaler 11 ihe, mana ikike na echiche ndị bụ isi bụ isi maka ụdị ihe dị na mbụ.
Mgbe nkuzi a mechara, ndị mmụta nwere ike:
Mara ikike na uru nke NetScaler
Kọwaa NetScaler mkpa iji hazie injinia
Nweta, kwunye, ma lelee ikikere NetScaler
Ịmata ọdịiche na ikike na NetScaler Ọnụ Ụzọ
Kpughe otu esi eji SSL eme ka NetScaler dị
Hazie nkwenye maka ndị ahịa na Ọnụ Ụzọ NetScaler
Nwee nkwekọrịta iji kpebie ihe ndị ahịa nwere ntinye
Hụ naNetScaler maka ịnweta elu
Na-ejikọta NetScaler Ọnụ ụzọ na Storefront ma ọ bụ Web Interface iji nye ohere ntanetị gaa Web, SaaS na ngwa ọdịdị.
Dezie nhazi nchịkọta na GSLB na kpuchie NetScaler
Rụgharịa NetScaler kpuchie maka usoro mmiri na ihe ndị dị mkpa
Hazie nyocha nchọpụta njedebe iji chọpụta ọkwa nke ịnweta ngwaọrụ
Inye ike inweta ngwa na ozi maka ndị mmekọ
Gosiputa ma nyochaa site na ngwaọrụ netwọk NetScaler
Hụ NetScaler Insight Center ka ịlele ihuenyo na-arụ ọrụ na desktọọpụ desktọọpụ
Mee ihe ngosi na usoro iji mee nchọpụta nyocha nke NetScaler na usoro netwọk
Ghọta otu ụdị ikike na uru nke NetScaler SDX ogbo.
Mara usoro nhazi nke usoro NetScaler SDX.
Kọwaa ụzọ n'ebe provisioning na nzukọ nke NetScaler VPX ebe na NetScalerSDX igwe.
Nzube nke Citrix NetScaler 11 dị mkpa na IZIRỊTA bụ inye echiche na ikike dị iche iche dị mkpa iji actualize, hazie, echekwa, ihuenyo, ọganihu, na nyochaa usoro Citrix NetScaler n'ime usoro nhazi usoro. A na-edezi usoro a karịsịa maka ndị na-eme ihe nchịkwa ndị nwegidere ma ọ bụ na NetScaler agafebeghị. Ụmụ akwụkwọ ga-enwerịrị itinye aka na-arụ ọrụ n'ime ụlọ arụmọrụ.
Usoro a na-adabere na Citrix NetScaler 11 ihe ọ bụla, Otú ọ dị ikike na echiche ndị bụ isi bụ isi maka ụdị ihe dị na mbụ. A na-esite na nchịkọta nhọrọ nke NetScaler SDX na arụmọrụ nrụgide.
N'ịbụ ndị na-amị mkpụrụ nke usoro a, ndị mmụta ga-enwe ike:
Rịba uru na ikike nke NetScaler
Nweta, wụnye, ma lelee ikikere NetScaler
Kọwaa otú SSL si tinye n'ọrụ iji nweta NetScaler
Mee ka NetScaler kpuchie maka ijeghari na nlekọta
Gbanwee usoro NetScaler maka usoro mmiri na ihe ndị dị mkpa
Jiri ngwaọrụ ndị a tụrụ aro na usoro systroubleshoot isi netScaler usoro na netwọk
Mee nyochaa NetScaler Mgbanwe ọhụrụ, nchịkọta ọnụ
Hazie nhazi stack na GSLB na NetScaler kpuchie
Ịmata ọdịiche dị na ikike, uru na usoro nchịkwa usoro nke NetScaler SDX ogbo
Kọwaa ụzọ maka provisioning na-eduzi NetScaler VPX oge na NetScaler SDX ngwa